Waxay ka samaysan tahay maro xoog badan oo fiber fiber ah oo lagu dahaadhay xalka polyurethane. Pu wuxuu leeyahay iska caabin xirasho wanaagsan, iska caabin qabow, hawo tirinta hawada, iska caabinta gabowga, iska caabinta dabka oo wanaagsan, biyuhu iyo guryaha antistatic. Badeecada ayaa muddo dheer loo isticmaali jiray kuleylka dajinta dhuumaha, qiiqa iyo ka hortagga dabka ee meelaha dadweynaha, qurxinta dhismaha gudaha iyo bannaanka iyo meelaha kale ee looga baahan yahay kahortagga dabka.
Vermiculite waxaa lagu dahaadhay maro fiber dhalada si siman, iyo filim difaac ah ayaa laga sameeyay dusha sare ee dharka fiber galaaska, taas oo ka dhigaysa heerkulka shaqada inuu kor u kaco 800 ℃. Isla mar ahaantaana, marada fijarka muraayadda ahi waxay leeyihiin iska caabin dabka ka xoog badan iyo waxqabadka burburka iyo iska caabinta khilaafaadka, iyo waxqabadka farsamaynta farsamaynta ayaa wanaagsan.
Bustada alxanka korantada ee aan dabka lahayn waxaa inta badan laga sameeyaa fiber-ka aan dabka guban karin oo waxaa lagu farsameeyaa habka gaarka ah. Astaamaha ugu muhiimsan: guban karin, heerkul sarreeya u adkaysta (550 ~ 1100 ℃), qaab dhismeed is haysta, xanaaq la'aan, qaab jilicsan iyo mid adag, oo fududahay in la duubo walxaha dusha sare iyo qalabka aan sinnayn.
Taxanaha bustaha aan dabka laynin badanaa waxaa laga sameeyaa fiber-ka dabka iyo dabka aan guban kareyn waxaana lagu farsameeyaa habka gaarka ah. Astaamaha ugu muhiimsan: guban karin, heerkul sarreeya u adkaysta (550 ~ 1100 ℃), qaab dhismeed is haysta, xanaaq la'aan, qaab jilicsan iyo mid adag, oo fududahay in la duubo walxaha dusha sare iyo qalabka aan sinnayn. Bustaha dabka ka ilaalin kara shayga meel ka fog goobta kuleylka iyo dhimbilaha, iyo gebi ahaanba ka hortagga ama go'doominta gubashada.